ကလေးထောင်မှ အရှင်ဂမ္ဘီရကို အင်းစိန်ထောင်ပြောင်းဟု မိခင်ပြော
တနင်္ဂနွေ, ၁၉ မေ ၂၀၁၃	Mizzima Burmese
တီဗီ | အင်္ဂလိပ် | ဓါတ်ပုံ | တီဗီ TUBE | DOWNLOAD FONT | ဆက်သွယ်ရန်
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > ကလေးထောင်မှ အရှင်ဂမ္ဘီရကို အင်းစိန်ထောင်ပြောင်းဟု မိခင်ပြော
ကလေးထောင်မှ အရှင်ဂမ္ဘီရကို အင်းစိန်ထောင်ပြောင်းဟု မိခင်ပြော	မျိုးသန့်	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၂၂ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကလေးထောင်တွင်ထောင်ဒဏ် ၆၃ နှစ် ကျခံနေရသည့် အရှင်ဂမ္ဘီရကို အာဏာပိုင်များမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေတွင် အင်းစိန်ထောင်သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ရေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့မှ ရန်ကုန်သို့ ပျံသန်းသည့် မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ် (MAI) ဖြင့် အရှင်ဂမ္ဘီရကို ညနေ လေးနာရီတွင် ပင့်ဆောင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်ရေးက သူရရှိထားသည့် လေယာဉ်ခရီးသည် စာရင်းအရ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။“ အန်တီသေချာတာက လေဆိပ်ခရီးသည် စာရင်းမှာ အန်တီ့သား ဦးညီညီလွင်တဲ့။ ဦးညီညီလွင်ဆိုတာ အရှင်ဂမ္ဘီရလေ။ လေယာဉ်ခရီးသည် စာရင်းကတော့ ဒေသခံတွေ ကူညီမှုပါ။” ဟု ဒေါ်ရေးက ပြောသည်။အရှင်ဂမ္ဘီရကို ထောင်ပြောင်းမည်ဟူသည့် သတင်းကို ကြိုတင်ရရှိထားသည့် ဒေါ်ရေးက ကလေး လေဆိပ်တွင် သွားရောက် စောင့်နေခဲ့သော်လည်း လေဆိပ်အတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်မရခဲ့ဟု မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။သို့သော် လေဆိပ်အတွင်းတွင် ထောင်ဝန်ထမ်းများ ပစ္စည်းသယ်ယူနေသည်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဒေါ်ရေးကပြောသည်။“ လေယာဉ်ကွင်းထဲကို အန်တီသိတဲ့ ထောင်ဝန်ထမ်း သုံးယောက်လောက်နဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကားနဲ့ သယ်လာတာတွေ့တယ်။” ဟု ဒေါ်ရေးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ဒေါ်ရေး လက်ခံရရှိသည့် ကလေးမှ ရန်ကုန်သို့ ပျံသန်းသည့် (MAI) လေယာဉ်ခရီးသည် စာရင်းတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဦးညီပုလည်း ပါဝင်ကြောင်းလည်း ဒေါ်ရေးက ပြောသည်။ ဦးညီပုသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရခိုင်ပြည်နယ် ဂွမြို့နယ်၏ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပြီး ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၅ နှစ် ကျခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
'သေမင်းတမန်' ရထားလမ်း ပြတိုက် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း မစနိုင်သေး
တလခွဲအတွင်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ထပ်မံ ဝင်ရောက်လာ
ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်စုလှူဒါန်း
တရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိ
လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီး အလုပ်သမား စေလွှတ်မှု စောင့်ကြည့်
ပုဒ်မ ၄၀၁ ကို နိုင်/ကျဉ်းဟောင်းများ အလိုမရှိကြ
လူစီးရန် မသင့်သည့် တိုက်ကြေ ကားများ တင်သွင်းမှုကို အရေးယူမည်ဟု ဝန်ကြီးပြော
MAI ၏ Airbus ရန်ကုန်-မန္တလေး ခရီးစဉ်ကို မေ ၂၆ ရက်တွင် စတင် ပျံသန်းပေးမည်	မိုးထိမိုးမိ ခေါင်းဆောင်များ ရရှိ အာမခံ မယူဘဲ အမှုရင်ဆိုင်နေ	ရွှေဝါရောင် ဦးဆောင်ကိုယ်တော် ထပ်မံထိန်းသိမ်းခံရ	မန်း လေဆိပ်တွင် ဆိုက်ရောက် ဗီဇာ ထုတ်ပေးတော့မည်	မန္တလေး-ဗုဒ္ဓဂါယာ တိုက်ရိုက်လေကြောင်း ပျံသန်းတော့မည်	အကျဉ်းသား ရိုက်နှက်မှုဖြင့် ပဲခူးထောင်မှူးအား အရေးယူမည်ဟုဆို	စစ်တွေထောင်လွတ်မြောက်မှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့်နိုင်ငံသား အများဆုံးပါဝင်	Who is Online
We have 85 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved